I-Spotify ivula iiPodcasts zeVidiyo ukuze zikhuphisane neYouTube | IPhone iindaba
I-YouTube iye yaba iqonga apho yonke into ilingana khona, Nditsho nepodcast enjengale siyirekhodayo veki nganye kwi-Actualidad iPhone. Kunyaka ophelileyo, uSpotify wenze okuninzi okushukumayo okunxulumene nepodcast, ukuthenga amaqonga ahlukeneyo kunye nokubetha ngeendlela ezahlukeneyo kwabanye abadali bemixholo ukuba bathumele kuphela kwiqonga labo.
Ukongeza kwi-podcast yase-US u-Joe Rogan, u-Spotify Iya kubonisa noMichelle Obama kwiqonga layo lePodcast. Ndiyabulela koku kusayina kubini, iimveliso ezinkulu ziqala ukubona ukuba iipodcast liqonga elinomdla lokuthengisa kwaye apho ngokucacileyo iSpotify ifuna ukufumana iqhekeza elibalulekileyo.
Iindaba zamva nje ezinxulumene neenzame zeSpotify kwihlabathi lePodcast, sizifumana kuloo nto ngoku kunokwenzeka ukonwabela iividiyo zethu ezizithandayo zePodcast (okoko zikhona) ngeqonga lomculo laseSweden.
Ngokungafaniyo neYouTube, kwiSpotify, sinokonwabela kuphela iaudiyo yepodcast oyithandayo, kuba oku izakuqhubeka nokudlala ngasemva xa sitshixa isixhobo, sicima usetyenziso okanye sicime isikrini. Kuya kufuneka kukhunjulwe ukuba iqonga leSpotcast podcast lisimahla kuye wonke umntu kwaye akufuneki ube ngumntu obhalisileyo ohlawulelwayo ukuze uzonwabele.
Iipodcast zokuqala zevidiyo esele zikho kweli qonga zezi:
Incwadi yeBhola yeBhasikithi 2.0
Abadlali bebhola ekhatywayo
Imfundo ePhakamileyo noVan Lathan noRachel Lindsay
I-Rooster Teeth Podcas
Inani leSpotify liqhubeka nokukhula rhoqo kwikota, enkosi ngokuyinxalenye, kubhejo alwenzayo kwiipodcast. Sebenzisa usetyenziso ukumamela umculo wethu owuthandayo xa usasaza kunye nenye kwiipodcast kukhululekile.
Kwakhona, Akukho mfuneko yokuba bahlawule iinkampani ezirekhodayo Kwaye nangona olunye utyikityo lwamva nje lubize, ukutsala abathengisi abatsha nabakhulu kubavumela ukuba benze imali ngokulula kolu tyalo mali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » IPhone iindaba » I-Spotify isungula ii-podcast zevidiyo eziza kukhuphisana ne-YouTube
Indawo kunye nokuchongwa kwesandla kwii-headphone ze-Apple
I-Apple ukubhiyozela uSuku lwezeMidlalo kuZwelonke e-China ngomceli mngeni omtsha we-Apple Watch